जापानको पासपोर्ट विश्वमै शक्तिशाली , जान्नुहोस् नेपाल कुन स्तानमा कुन? - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
जापानको पासपोर्ट विश्वमै शक्तिशाली , जान्नुहोस् नेपाल कुन स्तानमा कुन?
कुनै देशको पासपोर्ट कति शक्तिशाली छ भनेर मापन गर्न उक्त देशका नागरिक वा पासपोर्टधारीले कति देशमा सहज आवतजावत अनुमति पाउँछन् भन्ने कुरालाई आधार मान्ने गरिन्छ ।विगत १३ वर्षदेखि विश्वभरका देशको पासपोर्टको र्‍याङ्किङ गर्दै आएको संस्था ‘हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स’ले मंगलबारमात्रै सन् २०१८ मा कुन देशको पासपोर्ट कति शक्तिशाली भन्ने सूची प्रकाशन गरेको छ ।
कुन देशका नागरिकले कति देशमा अन अराइभल भिसा वा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउँछन् भन्ने तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर सूची प्रकाशन गरेको हेनेलीले जनाएको छ ।‘हेनेली पासपोर्ट इन्डेक्स’का अनुसार सन् २०१८ मा जापानको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट बन्न सफल भएको छ । जापानी नागरिकले १९० देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्न सक्छन् ।
जापानले म्यान्मारबाट यसै महिनामात्रै भिसा फ्रि इन्ट्रीको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो स्थानमा रहेको सिंगापुरका पासपोर्टधारीले भने १८९ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्छन् ।गतवर्ष सूचीको शीर्षस्थानमा रहेको जर्मनीको पासपोर्ट भने यसपटक तेस्रो स्थानमा झरेको छ । तेस्रो स्थानमा जर्मनीसँगै फ्रान्स र दक्षिण कोरिया पनि रहेका छन् । यी देशका नागरिकले १८८ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्न सक्छन् ।
त्यस्तै १८७ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्ने डेनमार्क, फिनल्याण्ड, इटाली, स्वीडेन र स्पेन चौथो स्थानमा रहेका छन् ।अमेरिका, बेलायत, नर्वे, अष्ट्रिया, लक्जेमबर्ग, नेदरल्याण्ड र पोर्चुगल भने पाँचौ स्थानमा रहेका छन् । यी देशका नागरिकले १८६ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्न सक्छन् ।द्रुत रुपमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छिमेकी मुलुक चीन भने ७१ औं स्थानमा रहेको छ । चिनियाँ नागरिकले ७४ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउँछन् ।
दक्षिण एसियाली देशहरुमध्ये मालदिभ्सको पासपोर्ट सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको छ । इन्डेक्समा ५८ औं स्थानमा रहेको मालदिभ्सका नागरिकले ८७ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री प्राप्त गर्छन् ।त्यस्तै छिमेकी देश भारत ८१ औं स्थानमा रहेको छ । भारतीय नागरिकले ६० देशमा भिसाबिनै प्रवेश गर्न सक्छन् ।५५ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउने भुटान ८६ औं स्थानमा रहेको छ । ४२ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउने श्रीलंका ९९ औं स्थानमा रहेको छ ।
त्यस्तै १०० औं स्थानमा रहेको बंगलादेशका नागरिकले ४१ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउँछन् ।१०१ औं स्थानमा रहेको नेपालका नागरिकले भने ४० देशमा मात्रै सहज प्रवेश पाउँछन् । त्यस्तै १०४ औं स्थानमा रहेको पाकिस्तानका नागरिकले ३३ देशमा मात्रै भिसा फ्रि इन्ट्री पाँउछन् अन्तिम स्थानमा भने इराक र अफगानिस्तान रहेका छन् । १०६ औं स्थानमा रहेका इरका र अफगानिस्तानका नागरिकले ३० देशमा मात्रै भिसा फ्रि इन्ट्री पाउँछन् ।
त्यस्तै ओसियानिया अन्तर्गतका कुक आइल्याण्ड, माइक्रोनेसिया, न्यू, पालाउ आइल्याड, सामोआ, टुभालु गरि ६ देशमा भिसा फ्रि इन्ट्री पाउने गर्छन् ।क्यारेबियन देशका डोमिनिकन गणतन्त्र, हाइटी, सेन्ट भिसेन्ट एण्ड गि्रनेडाइन्स र अमेरिकी महादेशको बोलिभियामा अन भिसा फ्रि इन्ट्री पाउँछन् ।
भारतीय कांग्रेस आइका अध्यक्ष राहुल गान्धी दिल्लीबाट पक्राउ
अमेरिकाले दियो भारतलाई प्रतिवन्धको चेतावनी !